06 Jul, 2014 - 07:07	 2014-07-06T07:03:29+00:00 2014-07-06T07:03:29+00:00 0 Views
Nyorai nhetembo pfupi seriri pazasi motumira ku: Nhetembo, Kwayedza Box 396 Harare kana kutumira pa-Email inoti [email protected] kana kuzosiya pamahofisi edu ari paHerald House, muHarare. Musakanganwe zita remunyori, chikoro negwaro rake uye kana zvichiita, titumirei nekamufananidzo (passport size) kemunyori.
MUCHANDIONA MAVE KUPERA
Ndauya ini changamire!
Hama huru yavakazi
Eheka, vakadzi ndidzoka
Dzinofarirwaka navarume vose
Avo ndiri kutsvaka nameso matsvuku
Ndipoka pastime pandinovabatira.
Ndauya ini mambo wamadzimambo,
Kunyarara zvangu asi hamungandigoni
Vanouya vakarivara varume
Hanzi ndipiwe rudo naChenai
Ndinenge ndiripo zvangu ndichiona
Ndakamirira kusveta ropa.
Ndinoda ravarume kutanga
Vakadzi ndinozotora varume vapera
Ndauya in nhume yamarufu,
Hamungandigoni ndinogara ndakawanda,
Imomoka mugwenzi guru rine bvute,
Bvute rinokwezva varume.
Vanouya vakatsinzi sevakakotsira,
Havandioni ndinenge mhepo,
Asi ndinenge ndiripo zvangu,
Muchandiziva mave kupera.
Ndauya ini chapwanya
Handina murume wandionma kusiya
Ndiro zariva rangu guru risingapotsi
Iro rinondibatira mikono
Vane mari nevasina, vakobvu navatete
Muchandiona mave kupera.
Vimbainashe Shirichena ari muGrade 7 paDavid Livingstone Primary School, muHarare.
Vimbai waita zvako nenhetembo yako iri pamusoro pechirwere cheshuramatongo. Nyaya yauri kunyora nezvayo yakakosha zvikuru, asi ndinoda kuti kana uchinyora nhetembo pamusoro penyaya dzerudzi urwu, umbotanga waita tsvakurudzo yakasimba, kuitira kuti unyore zvisingarasise vanhu. Uyewo, kana uchinyora zveshuramatongo kupuraimari, edza chaizvo kuti nhetembo dzerudzi urwu dzisabate zvakawanda-wanda. Ukanyora zvakawanda, unozvipiringisha zvekuti pfungwa dzauri kuda kuburitsa dzinogona kusazobuda zvakanaka.
Chikonzero chaita kuti ndikurudzire kuita tsvakurudzo pamusoro penyaya yechirwere cheshuramatongo ndechekuti ndima yako yekutanga iri kuita sekuti chirwere cheshuramatongo chinongouya kana kuti kuwanikwa nekuda kwevarume vanenge vachitsvaga vanhukadzi. Ichocho hachisi chokwadi, nekuti kune vamwe vane chirwere ichi nekuda kwekuti vakangozvarwa vainacho. Vamwewo vakabatwa chibharo, uyewo vamwe vakachekwa mutsaona nezvimwewo zvakadaro. Sakai we ukagara watoti vakadzi ndiro tsime rinobatirwa varume nechirwere cheshuramatongo, wadzidzisa zvisiri izvo.
Chimwezve ndechekuti iwe ukange wopa chirwere mbiri nemazita akaita sekuti “changamire” “mambo wemadzimambo” zvinoita sekuti chirwere ichi hachikundike, chinova chisiri chokwadi.
Hachisi chokwadi zvakare kuti hutachiwana uhwu hwave kugara hwakahwanda sezvauri kutaura nekuti mazuva ano vanhu vave kutomhanyidzana kunoongororwa ropa ravo kuti vazive kuti rine hutachiwana here kana kuti kwete.
Musoro wenhetembo yako unoti, “Muchandiona mave kupera” asi chirwere chauri kutaura ichi chakatoonekwa kare, uye vanhu vane nguva yavakanga vachipera, asi iko zvino vanhu vave neruzivo rwakanyanya rwekuti vangazvidzivirire chirudzii. Saka iwe sanyanduri unofanira kuti uchenjerere zvinhu zvakadai, kuti hausi kunyora nhetembo yako uri mumashure mezviitiko here.
Ngwarirawo zviperengo zvako mwanangu. Kunze kwezvishoma izvi, ndinoti wagona uye ramba uchinyora nekuti unoratidza kuti chipo unacho.